အင်တာနက်မလိုဘဲ ကစားလို့ရမယ့် မိုဘိုင်းဂိမ်း ၅ မျိုး – MyTech Myanmar
အင်တာနက်မလိုဘဲ ကစားလို့ရမယ့် မိုဘိုင်းဂိမ်း ၅ မျိုး
အခုခေတ် မိုဘိုင်းဂိမ်းအများစုဟာ ဆော့လို့ ကောင်းပြီး စွဲလမ်းစေတာ မှန်ပေမယ့် များသောအားဖြင့် အင်တာနက်ရှိမှ ဆော့ကစားလို့ ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မီးပျက်ရင် အင်တာနက်လိုင်း ပြတ်တောက်ရင် ဆော့ဖို့ အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။
ဒီလို မဖြစ်ရလေအောင် တစ်ခါ Install လုပ်ပြီးတာနဲ့ Offline လည်း ကစားလို့ရတဲ့ မိုဘိုင်းဂိမ်းကောင်းလေး ၅ မျိုးကို ရွေးချယ်ပြီး ညွှန်းဆိုပေးပါရစေ။
ကွန်ပြူတာဂိမ်းခေတ်မှာ ကလေးတော်တော်များများရဲ့ အသည်းစွဲအဖြစ် မှတ်မိနေကြမယ့် Plants Vs. Zombies (PvZ) ကို မိုဘိုင်းပေါ်ယူဆောင်လာတဲ့အခါမှာ မူရင်းဗားရှင်းကို အကြိမ်ကြိမ်ဆော့ပြီးလို့ ညည်းငွေ့နေမယ့် ပရိသတ်အတွက် အပင်သစ်တွေ၊ ဇွန်ဘီအသစ်တွေသာမက နောက်ခံဇာတ်လမ်းအသစ်ပါ ပါဝင်တဲ့ PvZ2ကိုပါ ထုတ်ဝေလာခဲ့ပါတယ်။
PvZ ကို မဆော့ဖူးသေးတဲ့သူတွေအတွက် မိတ်ဆက်ပေးရရင်တော့ အိမ်ထဲကို ဝင်ပြီး လူတွေရဲ့ ဦးနှောက်ကို စားသောက်မယ့် ဇွန်ဘီတွေကို သစ်ပင်လေးတွေနဲ့ Tower Defense ပုံစံမျိုး ကာကွယ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြင်နေကြ Tower Defense ဂိမ်းတွေထက် ထူးခြားတာကတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကာတွန်းပုံလေးတွေကြောင့်ရော သစ်ပင်တစ်ခုချင်းရဲ့ မတူညီတဲ့ တိုက်ခိုက်ပုံတွေကြောင့်ရော ပိုစွဲလမ်းလွယ်စေပါတယ်။
2. Spider-Man: Unlimited
Endless Runner ဂိမ်းတွေကို သဘောကျတဲ့သူတွေဟာ မတူညီတဲ့ ပုံစံနဲ့ Runner ဂိမ်းတွေ (ဥပမာ – Temple Run, Surf Way Surfer, Agent Rush စသဖြင့်) ကို ရှာဖွေပြီး ကစားကြလေ့ရှိပါတယ်။ Runner ဂိမ်း ပရိသတ်တွေ သာမက Marvel ပရိသတ်တွေအတွက်ပါ အဆင်ပြေစေမှာကတော့ Spider-Man: Unlimited ပါ။
ဒီဂိမ်းကို အခမဲ့ရရှိနိုင်ပြီး Offline လည်း ကစားလို့ရပါတယ်။ Spider-Man ဟာ သူ့ရဲ့ အဓိကဗီလိန်တွေကို တားဆီးရမှာဖြစ်ပြီး သာမာန် Runner ဂိမ်းတွေလို ပြေးလွှားနေတဲ့ ကိုယ့်ဇာတ်ကောင်ကို ဘယ်ညာအပေါ်အောက် ထိန်းရတာလောက် မဟုတ်ဘဲ လေထဲမှာ အချိန်အဆ မှန်မှန်နဲ့ ပင့်ကူမျှင်တွေထုတ်ပြီး လွှဲသွားရတာ၊ ဗီလိန်တွေကို တိုက်ခိုက်ရတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ကစားရတဲ့ ဇာတ်ကောင်နေရာမှာလည်း သမာရိုးကျ Spider-Man အပြင် ကောမစ်တွေထဲက Spider-Man ဗားရှင်းပေါင်းစုံနဲ့ပါ ရွေးချယ်ကစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
3. Assassin’s Creed: Pirates
Assassin’s Creed လို့ဆိုလိုက်ရင် ကွန်ပြူတာနဲ့ ကွန်ဆိုးဂိမ်းတွေပေါ်က Stealth Action ဂိမ်းကိုပဲ ပြေးမြင်ကြမှာ ဖြစ်ပေမယ့် AC Pirates ကတော့ မိုဘိုင်းပေါ်မှာ ကွဲပြားတဲ့ Gameplay နဲ့ အခမဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ကစားသူဟာ တစ်ချိန်က နာမည်ကျော်ပင်လယ်ဓါးပြဗိုလ်တစ်ဦးအဖြစ် ကစားရမှာ ဖြစ်ပြီး အခြားသင်္ဘောတွေကို တိုက်ခိုက်လုယူတာ၊ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အဆောက်အဦးပျက်တွေထဲက ရတနာတွေကို ရှာဖွေတာ၊ ကိုယ့်သင်္ဘောကို Upgrade လုပ်ပြီး အားကိုးရမယ့် လူတွေကို လိုက်ခေါ်တာ၊ နောက်ဆုံး အပြင်းပြေ ငါးမျှားတာအထိ လုပ်လို့ ရပါတယ်။
တချိန်က ကွန်ပြူတာမှာ လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ Sid Meier’s Pirates ဂိမ်းနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူပြီး အဲ့ဒီဂိမ်းကို မှီခဲ့တဲ့ မျိုးဆက်ဟောင်းဂိမ်မာတွေအတွက်လည်း ဖုန်းပေါ်မှာ အခမဲ့ Offline ကစားနိုင်မယ့် ဂိမ်းတစ်ခုပါ။
Archero ဟာ အင်တာနက်ချိတ်ထားချိန်မှာ Bonus အချို့ ရပေမဲ့ Offline လည်း အပြည့်အဝ ဆော့လို့ရတဲ့ အချိန်ဖြုန်းလို့ ကောင်းတဲ့ RPG ဂိမ်းလေးတစ်ခုပါ။ ကစားသူဟာ အလိုအလျှောက် မြားပစ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ဟီးရိုးလေးကို လက်နက်တွေဆင်၊ Level တွေတင်ပြီး အန္တရာယ်များတဲ့ Dungeon တွေကို အောင်နိုင်အောင် ထိန်းချုပ်ကစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခါဆော့တိုင်း Level 1 ကနေ ပြန်စပြီး Level တက်တိုင်းမှာ အထူး Ability (ဥပမာ – တပြိုင်တည်း မြားနှစ်ချောင်းထွက်တာ၊ နံရံကျော်ပြေးတာ၊ စသဖြင့်) တွေကို ရွေးချယ်ယူရပြီး ကိုယ့်ကစားပုံနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ Ability အတွဲအစပ်မှသာ နောက်ဆုံး ဆရာကြီးထိ အနိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Dungeon တစ်ခုပြီးသွားတာနဲ့ ပိုခက်တဲ့ Dungeon နောက်တစ်ခုက အသင့် စောင့်ကြိုနေမှာဖြစ်ပြီး များများဆော့ရင် ရလာတဲ့ ဆုတွေနဲ့ ကိုယ့်ဟီးရိုးအတွက် Permanent Ability တွေ ဝယ်ပေးတာ၊ Weapon နဲ့ အခြား Accessories တွေကို Upgrade တင်တာတွေ လုပ်ပေးရပါတယ်။ အရမ်း ရှုပ်ထွေးတဲ့ ဂိမ်းတွေ မဆော့ချင်တဲ့သူတွေအတွက် တော်တော်လေး အချိန်ဖြုန်းလို့ ကောင်းတဲ့ ဂိမ်းပါ။
5. Esports Manager Simulator
Dota2နဲ့ CS:GO ပရိသတ်တွေထဲမှာ ကိုယ်ပိုင် Esports အသင်းတစ်ခု ထောင်ပြီး ကိုယ့်အကြိုက်ဆုံး ကစားသမားတွေကို ခေါ်ယူ ပြိုင်ပွဲဝင်လိုတဲ့သူတွေရှိလား။ ဒါဆိုရင်တော့ Esports Manager Simulator ကို ဒေါင်းလိုက်ပါ။
ဒီဂိမ်းကတော့ ကျန်တဲ့ဂိမ်းတွေနဲ့ ပြောင်းပြန်၊ Offline ဆော့မှကို ပိုကောင်းတဲ့ ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့ဆို အင်တာနက်ချိတ်ဆော့ကစားခဲ့ရင် မကြာခဏ တက်လာတဲ့ Ads တွေက ပိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာ ကောင်းလို့ပါပဲ။
EMS ဂိမ်းမှာ နာမည်ကျော် Esports Pro ကစားသမားတွေကို ဘောလုံးမန်နေဂျာ ဂိမ်းတွေမှာလို အချက်အလက်တွေ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြထားပြီး နည်းပြတွေ ဘာတွေနဲ့ လေ့ကျင့်ပေးလို့လည်း ရပါတယ်။ ကစားသမား အပြောင်းအရွှေ့ကလည်း ဘောလုံးမန်နေဂျာဂိမ်းတွေနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ။ ဒါ့အပြင် Dota2နဲ့ CS:GO ဂိမ်းနှစ်ခုကို ကြိုက်ရာ ရွေးချယ်လို့ရပြီး အများဆုံး အသင်းလေးသင်းထိ Save မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
နောက်ကိုလည်း အပျင်းပြေ ကစားနိုင်မယ့် မိုဘိုင်းဂိမ်းတွေထဲက ကစားလို့ ကောင်းတဲ့ ဂိမ်းလေးတွေကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားဦးမှာပါ။ ဖတ်ရှုအားပေးတဲ့ သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
MyTech Myanmar2021-05-22T14:55:11+06:30May 21st, 2021|Games|
အွန်လိုင်း ဂိမ်းမှာ ငွေ ၉ သိန်းလောက် ရှုံးသွားလို့ သတ်သေခဲ့တဲ့ ၁၃ နှစ်အရွယ် လူငယ်
၂၃ ဒေါ်လာတန် Control Sci-Fi PC Game ကို Free ပေးနေတဲ့ Epic
နောက်မျိုးဆက် God of War ဂိမ်းကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်ကျမှ ဖြန့်ချိမည်